प्रदेश ३ योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले दिए राजीनामा
फरकधार / ३१ असार, २०७६
काठमाडौं– प्रदेश ३ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले आफ्नो व्यक्तिगत कारणले गर्दा राजीनामा दिनु परेको बताएका छन् ।
डा. देवकोटाले कुनै असन्तुष्टि रहेकाले आफूले राजनीमा नदिएको पनि बताएका छन् । काठमाडौंबाहिर रहँदा आफ्नो अध्ययनमा समस्या भएको भन्दै उनले राजीनामा दिएको राष्ट्रिय समाचार समितिले फाइल गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
उनले राजीनामा दिएपछि पदमा रहँदा मुख्यमन्त्रीलगायत प्रदेश सरकारको साथ र सहयोग पाएको पनि अध्ययनका कारण राजीनामा दिन आफू बाध्य भएको जनाएका छन् । उनले मुख्यमन्त्रीलगायतले राजीनामा फिर्ता लिन अनुरोध गर्दा पनि आफूले फिर्ता लिन नसकेको राससलाई बताएका छन् ।
साथै उनले आफू पदमा रहँदा धेरै कामहरु समयमा नै सकेको पनि बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति : असार ३१, २०७६ मंगलबार १०:२:२६,